Itoobiya Oo Albaabada U Laabeysa 30 Safaaradood Oo Ay Ku Leedahay Dunida
ADDIS ABABA(Wararka Maanta)-Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in ay waddo qorshe ay ku dhimeyso safaaradaheeda ku yaalla dacallada dunida.
Dowladda ayaa sheegtay in ay albaabada u laabayso 30 safaaradood oo ay ku leedahay dacallada dunida. Ujeedka loo xirayo safaaradahaas ayay sheegtay in ay tahay mid ay uga gol leedahay yareynta kharashaadka dowladda.
Qoraal uu ra’iisul wasaare Abiy Axmed u diray golaha baarlamanka dalkaas ayuu ku sheegay in uu wado qorshe uu ku xidhayo safaaradaha Itoobiya ay ku leedahay dalalka dunida oo ay ka mid tahay midda Nairobi.
“Ma habboona waqti xaadirkan in Itoobiya ay yeelato lixdan safaaradood iyo qunsuliyado kharashaad badanina ay ku baxaan meel kasta, waa in la xiro ugu yaraan 30 safaradood danjirayaasha inoo fadhiyana ay halkan ku shaqeeyan”
Ra’iisul wasaaraha ayaa tusaale ahaan u soo qaatay daniraha Itoobiya u fadhiya Nairobi oo uu sheegay in ay tahay in uu ku shaqeeyo Addis Ababa mararka qaarna uu safri karo si uu ula kulmo masuuliyiinta dantu kala dhexeyso.
Ra’iisul wasaare abiy ayaa hoosta ka xarriiqay in dib u habeyn lagu sameeyo shaqooyinka wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay mid lagama maarmaan ah.
Wararka Somali19 mins ago